သရုပ်ဆောင်စမိုင်းရဲ့မွေးနေ့ကံစမ်းမဲစာရင်းမှာပါဖို့ ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စု ၅ ခုမှာ ပို့စ်ကို မျှဝေစရာ မလိုပါ - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
သရုပ်ဆောင်စမိုင်းရဲ့မွေးနေ့ကံစမ်းမဲစာရင်းမှာပါဖို့ ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စု ၅ ခုမှာ ပို့စ်ကို မျှဝေစရာ မလိုပါ
June 11, 2020 June 11, 2020 နေရာမောင်LeaveaComment on သရုပ်ဆောင်စမိုင်းရဲ့မွေးနေ့ကံစမ်းမဲစာရင်းမှာပါဖို့ ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စု ၅ ခုမှာ ပို့စ်ကို မျှဝေစရာ မလိုပါ
သရုပ်ဆောင် စမိုင်းက မွေးနေ့မှာ အွန်လိုင်းကနေပြီး ငွေကျပ်(၃၆)သိန်းဖိုး ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်လို့ ဂရု ၅ ခုရှဲပြီး ဖုန်းနံပါတ်ရေးခဲ့ပါဆိုတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပို့စ်တစ်ခု လူမှုကွန်ယက် အသုံးပြုသူတွေအကြားမှာ ပျံ့နှံ့နေ တာတွေ့ရပါတယ်။
“May Yati”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူက “မွေးနေ့မှာ အွန်လိုင်းကနေပြီး ငွေကျပ်(၃၆)သိန်းဖိုး ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စမိုင်း ဂရု၅ခုရှဲပြီး ဖုန်းနံပါတ်ရေးခဲ့ပါ”စသည်ဖြင့်ရေးသားပြီး “ဖုန်းဖြင့် ငွေလက်ခံမည့် သူများစာရင်း”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စုမှာ မျှဝေထားပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်စမိုင်းဟာ သူမမွေးနေ့ပါတီမှာ အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ မဲဖောက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ရှိ တာတွေ့ ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း အခုလို့ ပို့စ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စု ၅ ခုမှာ မျှဝေခိုင်းပြီး ဖုန်းနံပါတ်ရေးခိုင်းသလားကြည့်ရအောင်ပါ။
သရုပ်ဆောင်စမိုင်းရဲ့ တရားဝင်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ “စမိုင္းလ္ Smile”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ဇွန် ၉ ရက်က အောက်ပါအတိုင်းကြေညာထား တာတွေ့ရပါတယ်။
“ကျမချစ်ရတဲ့ Smiley တွေကိုဘယ်လိုပျော်အောင်လုပ်ပေးရမလဲ ဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမလဲ အမြဲ စဉ်းစားနေတတ်တဲ့ကျမ အခုမွေးနေ့လည်းနီးလာပြီဆိုတော့ ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲ စဉ်းစား နေတာ…..အခုလို Covid အချိန်မှာလူတွေအဓိကလိုအပ်နေတာ ပိုက်ဆံပဲဆိုတော့ Smile ရဲ့မွေးနေ့မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါးဂိမ်းတွေလည်း Live ကစားကြမယ်။ Smiley တွေအကုန်လုံးကလည်းပါဝင်ကစားနိုင်မယ် ပြီးတော့ ကံစမ်းမဲတွေလည်းလုပ်မယ် ပထမဆု- ၁၀သိန်း ဒုတိယဆု – ၅ သိန်းအပါအဝင် သိန်းပေါင်း ၃၆သိန်းတိတိကို ချစ်ရတဲ့သူတွေကို လက်ဆောင်ပြန်ပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးကို ၂၁ရက်နေ့ မှာကျင်းပမယ်နော်. ဒီ Page လေးကို Like နဲ့ See first လုပ်ထားကြအုန်းနော်”လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
အလားတူပဲ ဇွန် ၁၀ ရက်နေ့မှာ “စမိုင္းလ္ Smile”အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ဗွီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့ တာတွေ့ ရပြီး အောက်ပါအတိုင်းရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
“Smile ရဲ့ Online Birthday Party! ကံစမ်းမဲတွင်ပါဝင်နိုင်ရန် မိမိ၏ Viber ဖုန်းနံပါတ်နှင့် မိမိနေထိုင်ရာမြို့ နာမည်ကို 09799896987 သို့ Viber သို့ရေးပို့ပြီးပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ဖုန်းနံပါတ်ပေးပြီး ကံစမ်းမဲပေါက်သူများ အား Viber Videocall ခေါ်ဆိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုကြေးများမှာ – ပထမဆု ၁၀သိန်း ဒုတိယဆု – ၅သိန်း တတိယဆု – ၃သိန်း အပါအဝင် ငွေသားကျပ်များအပြင် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်များလည်း အများအပြားပါဝင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။နောက်ထပ်ပိုက်ဆံရရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေကတော့ Live ကြည့်ပြီးGame တွေမှာပါဝင်ကစားရင်း ငွေသားဆုများရရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းပါလို့ ဆက်ဆက်ကြည့်ကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်နော်။ အားလုံးပဲကံ ကောင်းကြပါစေ။ *** အထူးသတိပြုရန်***မိမိ၏ viber number များ Comment အောက်တွင်မရေးကြပဲ အပေါ်ကပြောထားသောနံပါတ်သို့သာပေးပို့ကြပါရန်✔️”ဆိုပြီးတော့ ရေးသားထားပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အခုလို လူတွေကို လှည့်စားပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စုမှာ လူဉီးရေတိုးပွားအောင်လုပ်ပြီးရင် ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စုနာ မည် ပြောင်း၊ သတင်းတုသတင်းမှားတွေ၊ လှည့်စားထားတဲ့ သတင်းတင်ထားတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နဲ့ချိတ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ instant articles လို့ခေါ်တဲ့ လူဝင်ကြည့်တဲ့အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ကြော်ငြာထိုးခတွေရရှိတဲ့ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေကြတဲ ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စုတွေအကြောင်းကို ရေးသားထားတဲ့ သတင်းကို အောက်ပါ လင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါအချက်အလက်စိစစ်ချက်တွေအရ သရုပ်ဆောင်စမိုင်းဟာ ဇွန် ၂၁ ရက်မှာ အွန်လိုင်းမွေးနေ့ပါတီကျင်ပ သွားဖို့ရှိသလို မဲဖောက်ပေးဖို့ရှိတာမှန်ပေမဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ နေရပ်လိပ်စာကို Viber ဖုန်းနံပါတ် 09799896987 သို့သာပေးပို့ခိုင်းတာတွေ့ရပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စု ၅ ခုမှာ မျှဝေဖို့ပြေထား တာမတွေ့ရှိရပါဘူး။ “May Yati”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူမျှဝေထားတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူမျှဝေထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်ဟာ မမှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်ဖြစ်ပြီး လူတွေကို လှည့်စားထားတဲ့အချက် အလက်ဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။
Title:သရုပ်ဆောင်စမိုင်းရဲ့မွေးနေ့ကံစမ်းမဲစာရင်းမှာပါဖို့ ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စု ၅ ခုမှာ ပို့စ်ကို မျှဝေစရာ မလိုပါ
Tagged Actress SmileBirthdayLucky DrawMyanmarSocial MediaYangon